Akanakisa Mufananidzo 8 Blank Flange Mugadziri uye Fekitori | Puyang
Flanges zvikamu zvakakosha zvezvakawanda zveinjiniya uye mapombi emapombi. Inoshandiswa munzvimbo zhinji, dzakasiyana, senge kutakura (mapaipi, ngarava) epeturu, gasi, mvura, nezvimwewo, zvivakwa zvavo zvekugadzira uye zvesimba rekugadzira magetsi, makemikari, uye mafetiraiza emakemikari. , uye zvinhu zvavo zvakare zvakasiyanasiyana (yakaderera kabhoni simbi, yakaderera alloy simbi, simbi isina chinhu, simbi yepamusoro yesimbi, isina-ferrous simbi, kana zvakadaro) zvinoenderana nerudzi rwemvura uye nzvimbo yebasa.
■ Kutenga Kwezvinhu
■ Raw Raw Kuongorora
■ Kuchengetedza Kwezvinhu
■ Kugadzira Kuongorora Kwakachena
■ Kuchenesa Kuchenesa Mushure mekugadzira
■ Mechanical Pfuma Miedzo
■ Chimiro cheki
■ Kuongorora Kusingaoneki
■ Boora Makomba
■ Yekupedzisira Kuongorora
■ Chigadzirwa Kurongedza
Pakugadzira nhanho, Isu tinodzora tembiricha, tarisa saizi, wozoisa mukati mekupisa kurapwa choto. Wongorora michina chivakwa, saizi. Pashure paizvozvo, tinotanga machine,
Tarisa iko kukura zvakare. Ita zvisina kunyatsoongorora kuti uone kuti hapana kupaza mukati.
Boora maburi, kutara, kuongorora kwekupedzisira, kurongedza.
Isu tinoramba tichitsvaga chigadzirwa chakakwana, zvirimo zvesainzi uye tekinoroji uye mhando yepamusoro, hunyanzvi hwedhizaini dhizaini, basa rekufunga zvakanyanya kugutsa vatengi vedu uye nekudaro tinokunda musika pamwe chete.
Pashure: Blind Flange
Zvadaro: Plate Flange